Fitsapana momba ny fiara UK | Ny fanafarana ny fiarako
Fanandramana manankarena amin'ny fanovana ireo fiara nafarana noho ny fanarahan-dalàna…
My Car Import dia mpitarika amin'ny serivisy fitiliana fiara sy serivisy ho an'ny fiara Eoropeana na tsy eropeana. Izahay dia afaka manova ny fiaran'ny fiara mifanaraka amin'ny lalàna sy ny lalàna any UK.
Manana ivon-toeram-pitsapana IVA / MOT eo an-toerana izahay ary omen'ny DVSA fahefana feno hanatanteraka fitsapana fiara. Raha efa any Angletera ny fiaranao fa tsy manaraka ny fitsipiky ny UK momba ny fisoratana anarana dia faly izahay manampy amin'ny fanovana ny fiaranao ho mpankato, ary koa ny fanatanterahana ny fitsapana anao.
Ny ekipanay efa za-draharaha sy ny fitaovana marobe dia manome antoka fa ny fiaramanidina nohafarana dia azo antoka sy vonona amin'ny làlambe UK.
Ny ekipanay dia manana traikefa mitambatra am-polony taona maro amin'ny fanomanana fiara ho an'ny fitsapana IVA / MOT sy ny fitsapana IVA / MOT tenany. Hiezaka foana izahay hitazona ny fiaranao ho akaiky kokoa ny famaritan'ny mpanamboatra azy.
Raha manafatra fiara avy any Eropa ianao, dia hiasa izahay hahazoana taratasy fanamarinana ny fanajana (raha mbola tsy manana fiara iray ianao). Ity antontan-taratasy ity dia hamaritra izay fanovana ilaina hatao mifanaraka amin'ny lalàna momba ny fisoratana anarana amin'ny lalana any UK, izay mazàna mitaky jiro, haingam-pandeha ary fanovana hazavana any aoriana. Azontsika atao ny mitantana ny antontan-taratasy rehetra amin'ny fizotran'ny fisoratana anarana ny làlam-piaranao UK avy amin'ny fizotran'olon-droa, ka hatramin'ny fampiharana V55.
Ho an'ireo fiara nafarana avy any ivelan'i Eropa, dia hofenoinay avokoa ny fanovana sy ny fanandramana IVA raha ilaina izany.
Tsiahivina, ny governemanta UK dia manakana hatrany ny fahazoana antoka fa ny fiara vahiny izay efa tany amin'ny UK mihoatra ny 6 volana ary mbola tsy voasoratra anarana dia mandalo ny fanovana sy ny fanandramana ilaina. Makà teny nalaina avy aminay eto ambany hahazoana antoka fa mifanaraka amin'ny lalànan'ny fisoratana anarana amin'ny lalana any UK ny fiaranao.